TALOOYINKA UGU FIICAN EE KORITAANKA KUPENY EE BEERTAADA - DHIRTA DAWOOYINKA
Copena - sano ah oo dareemaya weyn ee hooska, iyo sidaas darteed waxay noqon kartaa mid wanaagsan oo leh beer cagaar ah. Beerta xayawaanka ee dooxada (magaca labaad waa kupeny) ayaa habboon in lagu abuuro naqshado jawi dabiici ah, gaar ahaan marka la tixgelinayo awooda dhirta si ay u koraan si dhaqso leh.
Guud ahaan, waxaa jira ilaa 50 nooc oo kupen ah, noocyo kala duwanna ma aha midabka kaliya ee midabka iyo qaabka ubaxa, laakiin sidoo kale xajmiga baadiyaha laftiisa (tusaale ahaan, kup oo ah shong ee shiinaha ah wuxuu koraa dhererka 120 cm). Horumarinta xirfadlayda iyo beeralayda hiwaayadda waxay doorbidaan inay koraan caro, daawo, qashin, hoos u dhac ama ballaadhan.
Haddii aad go'aansato inaad ku beerto dhirta lagu sharaxay beertaada, ka dibna macluumaadka soo socda ayaa gaar ahaan faa'iido leh.
Ku dheji kumbaska
Dhab ahaan wax kasta oo ciidda ah ayaa ku habboon koritaanka iyo horumarinta caadiga ah ee kupene, laakiin waxay u egtahay midka ugu fiican marka la beeray hooska ama hooska. Shuruudda kaliya ee ciidda - bacriminta khasabka ah. Meelaha la yaabka leh, kuwaas oo sidoo kale ku yaalla qorraxda furan, beertii beertii dooxada dooxada uma muuqato mid aad u qurux badan, oo buurnaanku wuxuu ku koraa xaaladahan si ka sii xun.
Marka aad dooranayso goob lagu beerayo, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo qoto dheer ee biyaha dhulka, sababtoo ah warshadani uma dulqaadanayso dareeraha joogtada ah. Haddii aad ku beeranayso koobab ka yar geedaha, ka dibna waxay si deg deg ah uga badbaadin doontaa haramaha, maaddaama cufnaanta cufan ee ay samaysay aysan ku siin fursad fursad nololeed.
Ma taqaanaa? Magaca Ingiriisku waxaa iibsaday Suldaanka Seal, taas oo macneheedu yahay "Solomon Seal" oo tilmaamaya sifooyinka bogsashada ee warshadan.
Beerista iyo taranta kupeny
Inkastoo xaqiiqda ah in khabiiro badani ay ka hadlaan suurtagalnimada in la beero dhulka lagu aaso wakhti kasta oo sanadka ah, waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo dhammaadka xagaaga, ka dib markii la ciribtiro meesha la doortay ee haramaha iyo qodaya ciidda 20-25 cm qoto dheer. Intaa waxaa dheer, in yar oo ash ah lagu dari karaa ciidda iyo bacriminta macdanta ayaa lagu dabaqi karaa, at heerka of 10-15 g halkii baadiyaha.
Lakabka qubeyska ayaa sidoo kale lagu shubayaa godadka la soo dhejiyay (dhagaxa la burburiyey iyo ciidadu waa u fiican yihiin doorka), ka dibna compost waxaa lagu daraa, kaas oo horay loogu qasay lakabka sare ee dhulka. Horumarin dheeraad ah waxay ku xiran tahay habka aad adigu u dooranayso.
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee faafinta daaqsinka beerta ubaxa dooxada dooxada waa kala qaybinta of rhizome, iyo geed soo dhaliyeyaashu ma aha mid aad u yar.
Nidaamka degitaanka laftiisu waa sidan soo socota: qayb ka mid ah rhizome leh asliga ah ama beton geedka dhulka lagu aaso 8-10 cm, ka dibna is waafajin dhulka oo ka sarreeya oo qoyaan. Labadii sanno ee ugu horreeyey ka dib markii uu soo dego, kupena aad ayuu u kordhay, korriin xooggan oo biloow ah waxay ku bilaabataa oo keliya halista noolaanshaha asalka ah.
Haddii aad go'aansatid inaad dacaayad ka sameysid kabadhada adoo beeraya qayb ka mid ah qalabka beerka deeqda ah, ka dibna ciidda waa in lagu qodaa goobta la xushay (30 cm qoto dheer), ka saar haramaha oo dhan iyo si fiican u yeel. Waxaa sidoo kale faa'iido leh in lagu daro ash xaabada, Bacriminta organic iyo macdanta.
Ka dib markii la beero, baadiyaha yar yar waa in la ilaaliyaa inta ugu badan ee suurtogalka ah ee ka soo baxa dareenka xad dhaafka ah.
Waa muhiim! Haddii aadan xakamaynin koritaanka iyo horumarinta shukaansiga, adoo samaynaya qaybta wada-xaajoodka dhowrka sanadood, kadibna wakhti dheer ayey sii kori doontaa, oo waxay bilaabi doontaa in ay dulmiyaan ama xitaa dadka ka baxsan deriska.
Marka lagu daro faafinta daaqsinka, abuur badanaa waxaa loo isticmaalaa. Si kastaba ha ahaatee, miraha kupena ayaa aad u dhif u xiran, tan iyo pollin ah ee warshad waxay dhici kartaa oo keliya oo leh caawimo ah bumblebees dheer. Ka reeban waa libaaxafka dooxada ee dooxada, taas oo sanad walba sanad walba ay ka muuqato tiro badan.
Guud ahaan, abuurka ayaa si dhaqso ah u luminaya biqilka isla markaana waxay u baahan yihiin in la dhajiyo, laakiin markaad dooranayso habkani waxa fiican inaad sameysid meel u dhow jiilaalka.
Waa muhiim! Warshadda koray laga bilaabo abuurku wuxuu bilaabmaa inuu ubaxo kaliya sannadka 3aad ama 5aad ka dib marka la beerto.
Tan iyo horumarinta qubayska waxay qaadataa waqti dheer dhulka hoostiisa, waxaad arki kartaa oo keliya caleemaha kowaad ee sanadka soo socda.
Hal meel ayaa dhirta ay ku koraan ilaa 15 sano.
Si fudud ku dheji, markaad ka jawaabayso su'aasha ah "Sidee ayaa taranka loo aasay?", Waa wax aan macquul aheyn in laga hadlo suurtogalnimada ah kala duwanaanta abuurka.
Kupena ee naqshada muuqaalka iyo isku dhafka dhirta kale
Burooyinka ornamental qaro weyn oo ay sameeyeen dhaqdhaqaaqa bupenes samee warshad martida soo dhaweyn leh beerta beerta ama beerta. Beerta xayawaanka dooxada ayaa si fiican u qarin doonta dhammaan qaybo faaruq ah oo aan la garanayn oo ka mid ah dhulka, waxayna ka dhigi doonaan meelahaan janno jilicsan.
Waxaa sidoo kale wanaagsan marka ay ku koraan hooska geedaha, taas oo sababta waxaa badanaa loo isticmaalaa in la beero geedka geedaha geedaha beerta. Si kastaba ha ahaatee, warshadu waxay awood u yeelan doontaa inay ka caawiso ururka ururinta dhagaxyada, inay noqdaan kuwa ku-meel-gaadh ah oo dhexdhexaad ah oo ka mid ah kuwa gaaban ee sii kordhaya (tusaale, daisies, asters ama pansies).
Isticmaalida qubeyska nashqadda muuqaalka, waxaad si xaqiiq ah u lumin doontaa, sababtoo ah xitaa marka uu ubaxay, caleemaha cirridka leh ee dhirta ayaa sii wadi doona guud ahaan midabka midab cusub.
"Solomnova daabac" waxay noqon doontaa astaan ​​aad u fiican oo ku saabsan daylayaasha iyo xawaashka, iyo beerto guud ee leh tulooyinka ayaa kaa caawin doona inaad qariso qiiqa guluubka guga. Intaa waxaa dheer, kupena waa mid aad u fiican ee xaafadda leh dhirta kale, taas oo, iyada oo kale, iyada oo doorbida penumbra.
Kuwaas waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo cayayaanka ah, kicin iyo morrozniki. By habka, dhirta kuwaas oo inta badan loo doorto doorka deriska for kupeny.
Kupena waxay u muuqataa mid wanaagsan in laga gooyo, sidaas darteed waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu abuuro bouquets ama diyaarinta ubax oo dhan.
Ma taqaanaa? Dhammaan qaybo ka mid ah ubaxyada dooxada dooxada ayaa aad u sun ah, inkastoo xayawaan badani ay ku cunaan farxad. Qeybaha ugu khatarta badani waa ciribta iyo miraha.
Bannaanka u badan oo ku talinaynaa beeritaanka beerta ubax ee dooxada iyada oo qulqulaya by digaaga ama duurka sanadlaha ah. Xaqiiqdu waxay tahay in marka ay duurka u koraan, ay hoos udhigaan afkoda waxay bilaabaan inay dhashadaan oo ay lumiyaan racfaankooda khibrad leh. Caleemaha sare beerta ubaxa ee dooxada si fiican u qarin this cillad this, kaliya sii kordhaya ee hooska ku xoortay.
Daryeelka qubeyska habka koraya
Ka dib markaad guriga ku dhufatid dacha ama beerta, waa inaad siisid daryeel fiican oo berrinka bannaan. Fikradani macnaheedu waa biyo waraabin ah iyo mulching ee ciidda, xakamaynta tayada hilibka, iyo sidoo kale nafaqada dhirta joogto ah.
Waraabiyo iyo mulching ciidda
Xulashada habka waraabinta waxay ku xiran tahay inta badan nooca beerta ubaxa ee aad koraan. Tusaale ahaan, xayawaanka midabada badan leh waa in lagu waraabiyaa si joogto ah, laakiin qiyaasaha qiyaasta dhexdhexaad ah, si joogto ah u ilaalinta qoyaanka ciidda, laakiin ma daadinayaan dhirta lafteeda.
Isla mar ahaantaana, kupu waa mid ballaaran, daaweyn iyo casaan, uma baahna waraabin joogto ah iyo u dulqaadashada abaarada muddada fog. Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in la waraabiyo noocyada qubeyska oo keliya marka aaney jirin wax roobab ah oo ka da'ay gobol gaar ah mudo dheer, iyo ciidda aad u qalalan.
Waa muhiim! Iyada oo qadar xad dhaaf ah oo qoyaan ah ee ciidda, qumbaha waxaa inta badan soo weeraray dabaylaha, slugs, caaryada iyo cudurada fangas kala duwan.
Sida caadiga ah, ka dib markii waraabiyo dhirta, bannaanka u dabacsan ciidda, laakiin in kiiska dharka doorashadan waa mid aan la aqbali karin, sababtoo ah waxaa jira had iyo jeer suurtagal ah in waxyeello ay gaarsiiso rhizome jilicsan, taas oo aad u dhow dusha sare. Sidaa darteed, Xakamaynta waxaa lagu bedelay cirridka.
Haddii cawsku faragaliyo dhir kale oo ku dhaca noloshooda oo dhan, ka dibna coupena way ka jirtaa iyaga oo kaliya dhowrka sano ee hore ka dib markii la beero. Dhirta yaryar maaha mid xoogan oo ku filan in ay la tacaalaan dul-dul-baxa, laakiin markii ay ubaxu daaqada ka soo baxaan ayaa koraan, cawsku ma lahaan doono fursad.
Si kastaba ha ahaatee, si ay hadhuudhka u dhintaan xitaa marxaladaha hore ee horumarinta, si fiican u baaro meesha beerto mustaqbalka iyo si taxadar leh u ururiyaan dhammaan caws. Ilaalinta dhirtu waxay caawin doontaa oo ay ku sii deyneysaa wada-xaajoodka, oo la sameeyo ka hor meelaynta tooska ah ee lagu aaso dhulka.
Sida aan horay u soo sheegnay, bupena waa wax aan la qabin oo ka kooban hal ciid ah oo kori kara carrada la gooyey, laakiin haddii aad rabto in aad hesho qurux badan oo buuxa dhirta xoog, ka dibna waa inaad ku beeri dhulka, hodan ku humus. Marka laga beerto ciidda bacrin ah (oo ay ku jiraan bacriminta marka la beerto dhirta), miiqyada dooxada ma quudin karo dhawr sano.
Haddii kale, marka aad heshay dhul aad u taran, korriin degdeg ah, waxaad u baahan doontaa inaad iibsato Bacriminta adag iyo macdanta oo lagu daboolo ciidda laba jeer xilli: xilli kowaad ee gu'ga, iyo labaadna inta lagu jiro ubax. Intaa waxaa dheer, xitaa dhulka ku taajirsan vitamiin, dhirta ayaa dareemaya ka fiican haddii hal mar sanadkii, guga, waxaa intaa dheer quudin leh Bacriminta organic: digada ama compost.
Waxaa laga yaabaa, kupena waa dhirta kaliya ee aad u adkaysata cayayaanka iyo cudurada dabiiciga ah.
Xayawaanka beerta marar dhif ah ayay ka jirtaa sida xun ee noocan oo kale ah, laakiin cimilada qallalan waxay weli ku jiri kartaa snails, slugs, iyo mararka qaarkood siisay sawfly, taas oo ku jirta daqiiqado daqiiqado ah oo awood u leh inay si buuxda u burburiyaan caleemaha geedka.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in aan la seegin xilliga muuqaalka cayayaanka si ay u bilaabaan halganka saxda ah iyaga.
Horumarinta guul leh ee kupeny waxay ku lug leedahay fulinta shuruud kale, taas oo ku habboon diyaarinta xilliga qaboobaha. Qaybta dhulka ee ubaxyada beerta, oo leh bilawga ah cimilada qabow, si fudud u dhinta, iyo rhizome deggana deggana sugto dhaxan dhulka.
Si kastaba ha noqotee, muuqaalkani waa mid ku haboon cimilada cimilada, si aan wax badan looga baahnayn. Si kastaba ha noqotee, haddii beeritaanka kupena ay ku dhacdo aagagga leh qabooba daran, dhirta waa in la siiyaa hoy dheeraad ah. Waxaa loo samayn karaa sida balka, peat ama lapnik.
Gaaban, beerista ubaxa beerta dooxada dooxada waxay keenaysaa natiijada la rabo oo kaliya haddii dhammaan talooyinka la xidhiidha beerashada iyo daryeelka dhirta si adag loo raacay.